Ifowuni yokusonga kaHuawei iya kuziswa ngo-2018 | I-Androidsis
Sele silinde iminyaka ukuba abavelisi abakhulu basungule ifowuni ngescreen esiguqukayo. Siyazi ukuba Samsung Galaxy X Iya kuba yeyokuqala ukusonga i-smartphone evela kumenzi waseKorea kwaye ngoku sinokukuqinisekisa oko IHuawei isebenza kwifowuni esongelayo.
Ayiloxesha lokuqala sisiva amarhe malunga nokuba kungenzeka ukuba iHuawei iphuhlise eyayo ifowuni enokusongwa kodwa ngoku ibiyi-CEO yenkampani, uRichard Yu, oqinisekisileyo ubukho bale projekthi. URichard Yu uxelele iqela leentatheli ngexesha le Ukunikezelwa kwe-Huawei Mate 20 kunye ne-Mate 20 I-Pro yokuba ifemu yaseAsia isebenza kwisixhobo esinesikrini esongelayo esiza kubhengezwa kwi-2019, nangona ngaphandle kokuchaza owona mhla.
Nangona engafuni ukuqinisekisa umhla wokumiliselwa kwefowuni yakhe yokusonga, i-CEO yeHuawei inike ulwazi malunga nezixhobo eziza kunyusa esi sixhobo. Ngale ndlela, kulindeleke ukuba ifowuni yesikrini eguqukayo IHuawei inenkxaso yenethiwekhi ye5G.Nobungakanani bescreen sakho? imfihlakalo, kodwa kuthathelwa ingqalelo iimpawu zepaneli yokusonga, iya kugqitha kwi-intshi ezi-6.
Ifowuni yeHuawei enokusongwa iqinisekisiwe
Into esiyaziyo kukuba Ifowuni ye-samsung esongiweyo iya kuziswa ngaphakathi kwesakhelo se I-Las Vegas CES, Owona mboniso mkhulu wezobuchwephesha oza kubanjwa ngeveki yokuqala kaJanuwari. Kwaye oku kuthetha? ukuba iHuawei ayinakusungula isisombululo sayo kude kube kamva.
Ayiloxesha lokuqala ukuba ifemi yaseAsia ikurhoxise ukwaziswa kwayo ukuze ingajongani nobunzima bomntu okhuphisana naye omkhulu kwimarike, kuya kuba sengqiqweni ukuba uHuawei alinde inyanga okanye ezimbini ngaphambi kokuba enze eyakhe ifowuni yokusonga. Nangona unokuthatha ithuba lokumiliselwa kwe Samsung Galaxy X ukuzisa esayo isisombululo esinexabiso eliphantsi kwaye ngaphezulu kokunxibelelana kwe-5G.
Nokuba iHuawei izisa nini ifowuni enokusongwa, inyani yokuba sinokuqinisekisa ubukho bayo ziindaba ezilungileyo. Abavelisi abangakumbi nangakumbi bayaxhuma kwizikrini eziguqukayo kwaye oku kuya kunceda abasebenzisi abaya kuba nesithembiso esibanzi sokukhetha ifowuni efanelekileyo kwiimfuno zabo kunye nemeko yabo yezoqoqosho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » Ifowuni yokusonga kaHuawei iyinyani kwaye iza kufika ngo-2019
I-Lenovo Bukela S kunye no-Watch C: iwotshi enesitayile kunye nokubukela okuhle kwabantwana
Isamsung iya kumilisela i-Galaxy "yonke isikrini" ngaphandle kwenotshi kunye nekhamera yangaphambili phantsi kwesikrini